I-Corfu, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeCorfu
Bukela ividiyo mayelana neCorfu
Hlola iCorfu noma iKerkyra isiqhingi samaGrikhi oLwandle i-Ionia nolwesibili ngobukhulu esiQhingini sase-Ionia esidlule esikhazimulayo.
Kuhlanganisa ifa elinothile oqukethe amasiko ahlukahlukene, izikhumbuzo ezingokomlando, imvelo enhle emangalisayo, amanzi acwebile olwandle acwebile futhi acwebile, imifino eluhlaza ebanda kakhulu unyaka wonke kanye nokujabula kwezakhamuzi, iyindawo ekahle yeholide kanye nokuphumula nokuphumula.
Ingenye yezindawo ezinendawo yonke ebeka ukupela okunamandla kubavakashi bayo.
Ngaphezu kwalokho, izici zayo zihlanganiswe ngokuphelele nengqalasizinda yezokuvakasha engenaphutha, indawo yokuhlala enhle yamahhotela, izindawo zokudlela, izikhungo zokudlela, ezemidlalo olwandle, imicimbi yamasiko, nokubona okuningi, ezikhumbuzo zomlando neminyuziyamu ekufanele ukuyihambela.
ICorfu inesimo sezulu esipholile nesipholile esenza kube yindawo ekahle yokuvakasha noma yokuhlala. Ebusika, izintaba zaseCentral Greece vimba imimoya yasenyakatho ebandayo ukuthi ingafinyeleli kuyilapho, ehlobo, ukushisa kubhekiswa yi-meltemia, imimoya ethambile, yasenyakatho nentshonalanga, nomoya oheleza ulwandle. Ngenxa yemisinga yomoya egcwele abaningi emabhishi esiqhingi asethuthukile aba izikhungo zokupholisa imimoya ezivunyelwe emhlabeni jikelele.
Kuhlalwe khona kusukela ngezikhathi ze-Paleolithic futhi kudlule ekuhlaselweni okuningi, futhi kutholile ukuthonya kwamasiko ahlukahlukene.
Kwakuyingxenye yoMbuso WaseByzantium kuze kube yi1204 lapho amaFrank ethatha iConstantinople yagcina inamathele kwabaseVenetians.
ICorfu ayikaze iwele ngaphansi kwengcindezelo yama-Ottoman ngenxa yamakhosi alandelanayo amaVenetians, amaFulentshi namaBrithani emakhulwini eminyaka adlule. Isiko labo libe nethonya elinamandla edolobheni: kulapha lapho iYunivesithi yaseGreek yokuqala ( I-Ionia Academy), okokuqala I-Philharmonic Orchestra futhi Isikole Sokuqala Sobuciko obuhle zasungulwa.
Izindawo ezimbalwa ezinhle kakhulu edolobheni laseCorfu ongahamba kuzo
I-Spianada iyisikwele esikhulu kunazo zonke eBalkan, enemisebenzi ephakeme yekhulu le-19th yemiklamo yezakhiwo yaseFrance. Lapha ungabuka imidlalo yekhilikithi, noma uye kumakhonsathi omculo ohlelwe unyaka wonke.
U-Liston, uphawu lokuhweba lwedolobha, lapho ama-aristocrat ayesebenzisa ukujabulela ukukhushulwa kwawo kusihlwa. Izindatshana zezimpawu zakha isimo sangemuva sothando senkomishi yekofi eyamukelwa kwelinye lamahhotela amakhulu asedolobheni.
ezinye izinto eziheha amadolobha ezinomlando ocebile
I-15th yekhulu elihlaba umxhwele INqaba endala, kanye neNqaba eNtsha.
I-Saint Michael neGeorge Palace engxenyeni esenyakatho yeSpianada,
inani elikhulu lamasonto. Okwakha umxhwele kakhulu iCathedral yakulo muzi, ende yensimbi iSonto leSt. Spyridon, umvikeli wasesiqhingi, ogama lakhe ligcinwa lapha. Kuqhutshwa imikhosi emine unyaka nonyaka lapho isidumbu se-Saint Spyridon sithwalwa sizungeze imigwaqo yedolobha (ngePalm ne-Easter ngeSonto, ngo-Ephreli 11th nangeSonto lokuqala ngoNovemba). Konke amaqembu e-philharmonic yedolobha ahambisana nokuhamba kwamaqembu kudala umbukwane owesabekayo.
Indawo yamagugu emhlabeni yiyo egcinwe kahle Old Town kaCorfu.
Izigodlo, izinqaba, izakhiwo zomphakathi ezithandekayo zombuso waseVietnam zihlangana ngokuhlukile nemigwaqo emincane eshaywe ngamatshe cobblestones kanye nezikwele ezincane ezivalekile. Ukuhambahamba emigwaqweni emincane emincane ebunjiwe enezitebhisi namaphaseji agudluliwe, okubizwa ngokuthi “kantounia ”, kuzokwenza uzizwe sengathi uke waya eGenoa noma Naples.
Izimpawu zokuthengisa ezakhiwe ezindala zikhumbuza ikakhulukazi Venice.
Ezinye Izindawo ezizithandayo
U-Ano noKato Plateia ne-pavilion yomculo
IPalaia Anaktora nezingadi zayo
Isigodlo saseMon Repos
I-Tomb of Menecrate
Umlando kaCorfu ugcwele izimpi nokunqoba.
Amanxiwa amathempeli asendulo amaGrikhi nezinye izindawo zasendulo zedolobha lasendulo laseKorkyra zitholakala ePalaiopolis. Izinqaba zangaphambi kwesikhathi ezifaka izindawo ezinamasu esiqhingini sonke ziyifa lezimpi eminyakeni yobudala ephakathi nokuhlasela kokuhlaselwa ngabaphangi nabama-Ottoman. Ezimbili zalezi zinqaba zibiyela inhloko-dolobha yayo. Kusukela ezikhathini zangezikhathi zakudala kuze kube ngekhulu le-17th, lesi siqhingi, ngemuva kokuxosha ngempumelelo ama-Ottoman phakathi kokuvinjezelwa kaningana, sathathwa njengendawo evikelekile yezwe laseYurophu ngokumelene noMbuso Wase-Ottoman futhi saba enye yezindawo ezivikelwe kakhulu eYurophu. Izinqaba zesiqhingi zazisetshenziswa amaVenetians ukuvikela ngokungenela kuka-Ottoman.
Izinqaba zaseCorfu, ezisezindaweni ezihlelekile kulesi siqhingi zisize ukuvikela lesi siqhingi kubahlaseli abaningi futhi baba nesandla ekuxosheni ukuhlasela kwaseTurkey okuphindaphindekile, okwenza iCorfu ibe ngenye yezindawo ezimbalwa e Greece awusoze wanqotshwa ama-Ottomans.
I-Ionia Academy isikhungo sokuqala semfundo yaseGrisi yanamuhla. Isakhiwo manje sesibuyiselwe ngokuphelele ngemuva kokuqhuma kwamabhomu e-WWII Luftwaffe. Kwakuyisikhungo esasigcina isiko lemfundo yamaGrikhi ngenkathi yonke iGreece yayisabuswa ama-Ottoman. Isikhungo semfundo sisungulwe amaFrance ngesikhathi sokuphatha kwabo amaFulentshi futhi baba yunivesithi ngesikhathi sokuphathwa kweBritish e1824.IneFilosical, Law, kanye neZokwelapha Izikole.
I-Ionia University yasungulwa e1984. Inezikole ezintathu neMinyango eyisithupha enikela ngezinhlelo zeziqu zabafundi kanye nezangemva kokuthweswa iziqu nezikole zasehlobo.
ICorfu inesiko elide lomculo, lemidlalo yeshashalazi futhi esebenzayo. The I-Nobile teatro di San Giacomo di Corfu kwakuyindlu yokuqala yaseshashalazini neye-opera yaseGrisi yanamuhla nendawo okwenziwa kuyo i-opera yokuqala yamaGreek.
Iminyuziyamu nemitapo yolwazi
Iminyuziyamu ebalulekile kakhulu yeminyuziyamu nemitapo yolwazi kaCorfu itholakala edolobheni, futhi yile:
Imnyuziyamu yobuciko base-Eshiya
Umphakathi wama-Philharmonic weCorfu
Umtapo wolwazi womphakathi
ICorfiot ifundela umphakathi
NgoLwesihlanu Olungile, kusukela ekuqaleni kwemini kuqhubeke, amaqembu ale nhlangano emithathu yamaPhilharmonic, ahlukaniswe ama-squads, ahambisana neqembu le-Epitaph lamasonto edolobha. Ekupheleni kwantambama, amaqembu aqoqana ndawonye ahlangana iqembu elilodwa ukuze ahambisane nokuma kwe-Epitaph yesonto lesonto, ngenkathi imashi yomngcwabo
NgoMgqibelo oNgcwele ekuseni, la maqembu amadolobha amathathu abuye abambe iqhaza emcimbini we-Epitaph weSt Spyridon Cathedrai ngokuhambisana nezithombe zikaSanta. I-litany ilandelwa ukugubha 'Kovuko Lokuqala'; amabhaluni edolobheni elidala ahlotshiswe ngendwangu ebomvu ekhanyayo, futhi Izilonda ziphonsa phansi amabhodwe amakhulu obumba (I ama-bótides, μπό full δδς full full ugcwele amanzi ukushaya umgwaqo, ikakhulukazi ezindaweni ezibanzi zeListon nangendlela ehlelekile.
Lokhu kwenzelwe ukulindela uvuko lukaJesu, okufanele lugujwe ngalobo busuku,
Once the ama-bótides Isiphithiphithi sesiphelile, amaqembu amathathu abukisa imigwaqo ebunjiwe ngobumba edlala "Graikoí”Imashi yemikhosi. Le mashi edume, iculo lesisiqhingi, yaqanjwa ngesikhathi sokubusa kwaseVenetian.
ICorfu ingafinyelelwa ngezinsizakalo zesikebhe namahlengethwa ezindizayo
Indiza evela Athens sezindiza
Ngamabhasi aya ezindaweni eziphambili esiqhingini ezihamba cishe kayisithupha ngosuku.
Uma ufuna ukuhlola iCorfu akukho okukuvimba…